Banijya News | » क्यानको चुनाब नवराज र सुनैना कस्ले मार्ला बाजी ? क्यानको चुनाब नवराज र सुनैना कस्ले मार्ला बाजी ? – Banijya News
क्यानको चुनाब नवराज र सुनैना कस्ले मार्ला बाजी ?
२१ कार्तिक, २०७६ काठमाडौं ।
कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) को मङ्सिर ७ मा हुने चुनावका लागि अध्यक्षका प्रत्याशी लगायतले आफ्नो समूह बनाउने, सदस्यहरुलाई भेट्ने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका थिए । केन्द्रका कतिपय सदस्यहरु खुलेरै आआफ्नो समूहको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका छन् । आसन्न महासंघको चुनावका अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज कुँवर र उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेको प्यानल चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि उत्रिएको छ । दुवै प्यानलले अहिले मतदाता भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् ।
लामो समयदेखि क्यानमा काम गरिरहेका कुँवर वरिष्ठता र अनुभवको आधारमा सदस्यहरुले आफूलाई मतदान गर्ने दाबी गर्दे आएका छन् । यस अगाडि उपत्यका बाहिरबाट आफू प्रत्याशी बन्न लागेको आफूले नै चिनाब जित्ने भन्दै चुनाबी माहोल बनाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सुनैना पाण्डे क्यानको इतिहासमै पहिलो पटक अध्यक्षको पहिलो प्रत्याशी हुन् । हाल उपाध्यक्ष रहेकी उनी यसअघि सचिव थिइन् । ‘क्यानको २७ वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै महिला नेतृत्वमा नआएका कारणले गर्दा आफु महिलको समेत नेतृत्व गर्दे बिजयी हुने बताउँदै आएकी छिन् । दुवै प्यानल चुनावी मैदानमा होमिँदा सदस्यहरु पनि विभाजित भइरहेका छन् ।
सन् १९९२ मा केही कम्प्युटर व्यवसायीहरुले स्थापना गरेको कम्प्युटर एशोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) अहिले महासंघको रुपमा परिणत भइसकेको छ । देशैभर करिब ५ हजार सदस्यहरु क्यानमा आबद्ध छन् । ४८ जिल्लामा शाखा छन् । सातै प्रदेशमा कार्यसमिति बनेका छन् । महासंघिय संरचनामा जान प्रदेश र जिल्ला तहमा संगठन विस्तार भएपनि अन्य महासंघजस्तो क्यानले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ ।
हाल क्यान महासंघमा ४ प्रकारका सदस्यता रहेका छन् । जिल्ला शाखा, व्यक्तिगत, संस्थागत र विषयगत गरी क्यानको सदस्यता लिन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ६ सयको हाराहारीमा सदस्यहरु छन् । यी सबै सदस्यहरुले नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा मत हाल्न सक्छन् । त्यस्तै काठमाडौंबाहिर ४ हजारको हाराहारीमा क्यान महासंघका सदस्यहरु रहेका छन् । उपत्यका बाहिरका सदस्यहरुमध्ये १० सदस्य बराबर एक जना सदस्यले केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । कुल सदस्यहरुबाट ११ सय ८३ जनाले मात्रै नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान गर्न पाउँछन् । महासंघ बनिसकेपछि समग्र आइसिटी क्षेत्रकै अभिभावक बन्नु पर्नेमा त्यो भएको छैन् । एकले अर्कालाई निषेध गर्दै आफू पक्षका सदस्यलाई छिर्को हान्ने प्रबृद्धि मात्र हावी छ ।